Cela iSemalt Indlela Yokulwa Nxamnye neDarodar Referral Spam
Kubalulekile ukunqanda ugaxekile lwe-darodar.com kwi-Google Analytics ngaphambi kokukhawuleza kwaye isithuthi esinyanisiweyo sokuba umntu obi aphephe kwi-akhawunti yakho unciphisa injini yokukhangela . Okukhethwa kukho kukudala izihlungi zegama lomncedisi kwi-Google Analytics yakho. Ngethamsanqa, iGoogle isinike ezininzi iingcebiso kunye nezifundiso malunga nendlela yokudala izihlungi ezichazwe ngaphambili ukukhupha i-traffic ye-darodar.com yokuthunyelwa kwi-akhawunti yakho - buy driver's license. Ukuba uqaphele izikhonkwane ezingaqhelekanga zokuthunyelwa kweengxelo kwiGoogle Analytics iingxelo ezithumela kwiikhonkco ezihambelanayo ze-eBay.com ne-Amazon.com, makhe sixelele ukuba inkohliso yamaRussia iqokelele i-ID ye-Google Analytics yokulandelela ii-ID kunye ne-malware kuwo onke kubo. Kukho amathuba okuba iwebhusayithi yakho ifumana ityala elibi ngenxa yokuba ichonge i-ID yakho yokulandelela.
U-Oliver King, i-12 (Semalt Umphathi wempumelelo yoMthengi, uchaza ukuba lo mntu waseRashiya usebenzisa onke ama-ID ukuba ahlole i-Google Analytics ngaphandle kokujonga iphepha lakho lewebhu. Ngaphezulu, yena, uthumela i-URL ethile yomthumeleli, uzama ukukhohlisa i-Google Analytics yakho. Uza kubona i-URL kwiwebhusayithi yakho, kwaye iya kukuhanjisela kwisixhumanisi esisebenzisanayo sokuba umntu ombi ushiye. Ngokuqhelekileyo, i-Amazon kunye ne-Alibaba zisetyenziselwa njengezixhumanisi ezihambelanayo, kodwa umntu omubi unamathele amanxulumano amaninzi kwaye aphinde avuselele abasebenzisi ngethemba lokuthengisa iimveliso zakhe kwi-intanethi nokufumana ikhomishini. Uninzi lwewebhusayithi yeevenkile zibuyisela ii-ID ezinxulumeneyo kwiikuki iintsuku ezimbalwa, kwaye ababi baqhubeka befumana imali kwiziko lakho.
1..Abanye abantu baya kukucela ukuba utshintshe ifayile ye -htaccess kwisayithi lakho, kodwa oku kulungile nanjengoko umntu omubi akayi kutyelela iwebhusayithi yakho.
2. Akukuchaphazeli indawo yakho, ngoko akufanele ukhathazeke ngako. Kunoko, kuya kuphazamisa ingxelo yakho ye-analytics, kunye nezinga lokuhlawula liyakunyuswa.
3. I-URL yokudlulisa iya kuba ne-ID yakho ye-Google Analytics Tracking ID. Lo mntu waseRussia uya kugqiba ngubani o tyelela ii-URL zokudlulisa phambili ngaphambi kokuba abuyele kwiinkcukacha zakhe ezinxulumeneyo.
4. Ipropati yokuqala kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics iya kutshitshiswa ngoku kwaye-Ipropati kunye ne-ID yakho yokulandelela iya kugqiba ngeleta "I."
5. Ii-ID ezidibeneyo zigcinwa kwiikuki, zingenzi iingxaki kwiikhompyuter yakho okanye iwebhusayithi yakho. Kodwa iya kuvuza loo mntu obi malunga neekomishoni kunye nokuhlawula iintlawulo.
6. Kwiziko elitsha kunye nesisiseko, kufuneka uvimbele ugaxekile usebenzisa izihlungi zegama lomncedisi kwi-Google Analytics yakho.
I-spam yokuhanjiswa kwewebhusayithi yenye yeengxaki ezinkulu kwaye yindlela yokwenza izinto ezonakalisa isayithi kwi-intanethi. Kufuneka ukhumbule ukuba akukho mntu u tyelela iwebhusayithi yakho. Kunoko, i-darodar.com yokudlulisa ugaxekile ivakashela isayithi lakho, idala ukubonakala kwaye ifunyenwe nalabo bahlelwe kwiakhawunti ye-Google Analytics. Ngoko, ukuba uke uqaphele i-spike kwindawo yokuthunyelwa kweakhawunti yakho ye-analytics, unokuba nomdla ekudaleni izihlungi okanye ukutshintsha iifayile zefayile .htaccess. Oku kuya kunqanda umntu omubi ekuhambiseni iindwendwe zakho kwiiwebhusayithi ezisekelwe kwikhomishini.